Halkalı Dhismaha Wadada Tareenka ee Kapıkule wuxuu ku kacdaa Beeraleyda Edirne! | RayHaber | raillynews
[18 / 05 / 2020] Daqiiqadii ugu dambeysay: Erdogan wuxuu ku dhawaaqay bandoowga 81 magaalo inta lagu gudajiray Iiddii	coronavirus
[18 / 05 / 2020] Golaha Wasakhda Dila ee Dila Coronavirus 30 Sekan	34 Istanbul
[18 / 05 / 2020] Shiinaha: Horey u socoshada baaritaanka Covid-19	86 Shiinaha
[18 / 05 / 2020] Bacriminta dabiiciga ah ee Mushaharka Beeralayda Bilaabaysa Bilaabashada!	GUUD
[18 / 05 / 2020] Waxsoosaarka Korontada ayaa Berri bilaabmi doona Ilısu Dam	47 Mardin
HomeTURKEYGobolka Marmara22 EdirneHalkalı Dhismaha Wadada Tareenka ee Kapıkule wuxuu ku kacdaa Beeraleyda Edirne!
Halkalı Dhismaha Wadada Tareenka ee Kapıkule wuxuu ku kacdaa Beeraleyda Edirne!
30 / 04 / 2020 22 Edirne, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Dhismaha wadada tareenka ee Halkali Kapikule ayaa caasiisay beeraleyda
Republic of Turkey Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha sameeyey iskaashiga Midowga Yurub ee la Istanbul Halkalı-Isbitaalka Mashruuca Tareenka ee Edirne Kapıkule wuxuu soo jiitay ficillo sabab u ah kororka cufnaanta meelaha beeraha. In kasta oo ciidda cufnaanta leh ee laga helay meelaha beeraha ay ugu wacan tahay mashruuca dhismaha ayaa hadana ah mid cajiib ah tuulada Kabaağaç ee degmada Havsa ee Edirne; CHP Edirne kuxigeenka Assoc. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Afhayeenka Trakya Platform Göksal Çidem iyo Madaxa Golaha Magaalada Edirne Ziya Gökerk Küçük ayaa sheegay in khasaare soo gaarey beeraleyda.
Republic of Turkey Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha sameeyey iskaashiga Midowga Yurub ee la Istanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Railway Line mashruuca dhismaha ee socda wuxuu ka falceliyay Edirne. Waxaa xusid mudan in dhismaha mashruuca socda, aasaaska kaas oo la dhigay xarunta tareenka taarikhiga ah ee Jaamacadda Trakya Karaağaç Campus, 25kii Sebtember 2019, ay kordhisay carada ciidda aagagga beeraha ee tuulada Kabaağaç ee degmada Havsa ee Edirne.
Sida ku xusan warkii Uğur Akagündüz ee SÖZCÜ; “In kasta oo mashruucan la rajaynayo inuu 4 sano jirsado, samaynta boodhka culus ee ay sababaan baabuurta waaweyn ee ka shaqeeya dhismaha mashruuca ayaa saamaynaya aagagga beeraha ee gobolka; Waxaa la sheegay inay wax u dhimayso wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale caafimaadka dadka iyo deegaanka. In kasta oo la shaaciyey in dayacaad ka dhacday beeraha beeraha mashruuca dhismaha awgood waxaa loo diray Agaasimeyaasha Gobolka ee Edirne ee Beeraha iyo Dhirta iyo Agaasinka Gobolka ee Deegaanka iyo Magaalooyinka; CHP Edirne kuxigeenka Assoc. Dr. Okan Gaytancıoğlu, afhayeenka Trakya Platform Göksal Çidem iyo Madaxa Golaha Magaalada Edirne Ziya Gökerk Küçük, waxay sameeyeen bayaan ku saabsan saameynta uu mashruucu ku leeyahay meelaha beeraha. Çidem, sharraxaaddiisa, wuxuu ku sheegay cabashooyinka soo-saareyaasha gobolka ee ka imanaya dhismaha mashruuca, Gökerk Küçük wuxuu sidoo kale sheegay saamaynta dhismaha mashruucu ku leeyahay meelaha beeraha ee gobolka; Dhanka kale, Gaytancıoğlu wuxuu sheegay in khasaaraha ka dhalan doona goobaha beeraha ay tahay in la daboolo.
Af-hayeenka Trakya Platform Göksal Çidem wuxuu sheegay in aagagga beeraha ee ku dhawaad ​​3-km u jirta dhismaha mashruuca ay si xun u saameeyeen samaynta boodh cufan; Soo-saareyaashu aad bay uga cawdaan arrintan mana garan karaan waxay samayn lahaayeen. Xaaladda ayaa aad u xun oo taxaddar ayaa loo baahan yahay. Haddii khasaare jiro, soo-saaraha warshadeed waa in magdhaw laga bixiyaa. Taxaddarro waa in si deg deg ah loo qaataa joogtaynta waxsoosaarka beeraha. Soosaarayaashu waxay qaadi doonaan tallaabo sharci ah, xitaa haddii aan tallaabo laga qaadin.
Cunno iyo tayo ayaa si xun loogu saameyn doonaa "
Guddoomiyaha Gudiga Fulinta ee Golaha Magaalada Edirne Ziya GökerkÜK, dhanka kale, waxay sheegtey in ciidda culus ee ay sameysay taraafikada taraafikada ee dhismaha mashruucan ay sababtay in meelaha beeraha ay ku daboolaan ciid; Ciidda la soo saaray waxay si xun u saameyn doontaa soosaarka iyo tayada wax soo saarka beeraha. Xaaladdan oo kale, uumi baxa qiiqa oo ay ugu wacan tahay darraanta dabaysha badan ayaa loo qaadaa aagagga beeraha ee jihada bari-galbeed. "Waxay adkaynaysaa sawir-qaadista iyada oo xayiraysa xubnaha geedaha ku koray gobolka, taas oo ah dhul beereed dhammaystiran, sida timirta caleen," ayuu yidhi.
"Waxay khatar ku noqon doontaa caafimaadka aadanaha iyo deegaanka"
Tilmaamaya in siigsiixa hawada ay ka hor istaagi karto in warshadu ay soo saarto oo ay dib u soo uruuriso ka dib uruurinta caleemaha, xididdada iyo jirridaha dhirta; Xaaladdan oo kale, waxay si tartiib tartiib ah u saameyn doontaa koritaanka dhirta iyo dhalidda. Waxay noqon doontaa lama huraan in dadka maxalliga ah ee la nool waxsoosaarkan ay xaaladdan saameyn ku yeelato. Haddii aan laga taxadirin, waxsoosaarka beeruhu wuu dhaawici doonaa dadka gobolkaan xaaladdan ayey saameyn ku yeelan doontaa waxayna khatar ku keeni doontaa caafimaadka dadka iyo deegaanka iyo jiritaankiisa. Way iska cadahay soosaarahu inuu waayi doono dakhli ka soo baxa hawshan awgeed. Waxaa muhiim u ah luminta soosaarayaasha in la go'aamiyo iyada oo la go'aaminayo khasaaraha ay soo gaari karto hay'adaha ay khuseyso si loo joogteeyo wax soo saarka beeraha. ”
"La ogeysiiyey Hay'adaha rasmiga ah"
Halka Gökerk Küçük uu sheegayo in qodobbada 2872, 1 iyo 3 ee Sharciga Deegaanka ee tirsigiisu yahay 30 ay tahay in lagu dabaqo si uu beeralleyda u xalliyo dhibaatada. “Haddii gobolkeenu yahay waddan sharci ah, qodobka la xiriira ee Sharciga Deegaanka No. 2872 waa in lagu dabaqo. Qaar ka mid ah muwaadiniinta, oo ka baxsan waaya dareenka tuulooyinka iyo muwaadiniinta ag maraya, ee dhibku soo gaadhay, ayaa u sheegay xaalada Agaasinka Beeraha iyo Maamulka Gobolka iyo Magaalooyinka. Maalmahan markii dadku u xayiran yihiin jidadka cudurka dartiis, xarumahayaga rasmiga ah waa inay lahaadaan waajibaadka ah inay aadaan gobolka oo ay go'aan ka gaaraan waxyeelada iyagoon ka cabaneyn beeraleydayada dhibanayaasha ah. Guddiyada Ilaalinta Beeraleyda, Degmada Beeraley iyo Agaasimayaasha Gobollada ayaa jira maalmahan ”.
“Waa in la joojiyaa waxyeelada”
Gökerkbahar, oo raba inuu baabi'iyo cabashada beeraleyda; Nasiib xumo, way adagtahay in la raaco shirkada shaqeysa 7/24 muddadan marka goobo badan oo shaqooyin ah ay ka nastaan ​​oo ay go aansadaan waxa ay sameynayaan daqiiqad kasta. Laakiin way ku filan tahay barashada dhirta. Qof kastaa wuu ogyahay in shaqada la qabtay loo qorsheeyay inaysan waxyeelayn beeraha iyo xoolaha, deegaanka iyo dadka. Maanta, marka beeruhu ay helayso ahmiyad dheeri ah, waxay ku habboonaan doontaa hay'adaha ay khusayso inay taxadaraan oo ay go'aan ka gaadhaan dhibaatada oo ay tirtiraan cabashooyinka ”.
“Waxay ubaahantahay Tareen Degdeg ah, Nooc sidoo kale”
Dhinaca kale, halka Gaytancıoğlu uu sheegay in mashruucu uusan waxyeello u geysaneynin muddadii uu hirgalay; Waxaan u baahanahay tareeno xawaare dheereeya leh si ay u gaaran una gaaraan adduunka, laakiin dabiicadda ayaa sidoo kale loo baahan yahay. Mid ka mid ahi waa inuusan dhaawac u geysan dhirta. Muhiimadda Beeraha, dhirta, cuntada iyo deegaankuba way sii kordhayeen gaar ahaan maalmahan marka uu jiro fayraska corona. Marka waa inaan ka fikirnaa mustaqbalka. Qof kasta waa inuu bartaa ereyga horumar waara. Waxay sameyn karaan lacag, laakiin waa inaysan waxyeelayn deegaanka markii ay lacag samaynayaan. Waxaan ugu baaqayaa qofkasta inuu fahmo dareenka arintaan. Wuxuu sheegay in macaamil xawaaladaha la soo gabagabayn doono sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah, laakiin goynta hadhuudhka ayaa ka bilaabmi doonta gobolka In kasta oo ay taasi jirto, beeraleygu ma haysto wax shaqo ah oo uu kula kulmo luminta soosaarka ”.
“Shirkaddu waa inay dabooshaa Khasaaraha”
Gaytancıoğlu ayaa sheegay in Turkiga waa howlgalka sharciga mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta; “Waxaa jira sharciga madaxda, mana ahan xukunka sharciga. Waxay kordhiyeen kirada xitaa in ka badan maalmaha fayraska corona. Cidna kama jawaabi karto, waxaa jira xaddidan da 'iyo xayiraad safarka oo u dhexeeya magaalooyinka. Waxay dhahaan 'Cidna kama falcelinno, aan sameyn karno intii karaankeenna ah.' Kuwani waxay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo dadweyne, laakiin sidoo kale bay'adda. Soo-saarka Beeraha waa inaan loo sameynin annaga kaliya laakiin sidoo kale jiilalka dambe. Mustaqbalka, biyaha iyo cunnada ayaa waliba sii noqon doona kuwa ka sii muhiimsan. Sidaa darteed, waa inaannaan isticmaalin kheyraadka. Sababtaas awgeed, waxaan ka dalbanaynaa shirkadda qandaraaslaha inay magdhow ka bixiso khasaaraha ka dhalan doona beeraha beeraha. ”
Waxaa la dhammaystiray Sannadkii 100aad
Trans-European Gaadiidka Hatları'nın in muddada xafladda groundbreaking qabtay Edirne tilmaamay mashruuca oo qayb ka ah Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, Midowga Yurub Gaadiidka iyo Guddoomiyaha Dhaqdhaqaaqa Violetta Bulc, Ergada Midowga Yurub ee Madaxweynaha Turkiga Christian Berger, Bulgarian Gaadiidka Information Technology Angel Popov iyo Wasiir ku-xigeenka Isgaarsiinta, Midowga Yurub iyo Maareeyaha Guud ee Xiriirka Dibadda iyo Madaxa Hay'adda Isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Agaasimaha Erdem Tareennada General State Turkey Ali illayn ka qayb ku haboon. Mashruuca ayaa la filayaa in ay buuxiso samaynta Jamhuuriyadda Turkiga ee 100-ka.
Socodka Tareenka Gemlik ayaa ka soo horjeeda Beerta Beerta
Jahawareerka Calaamadinta ee Beelaha Tareenka ah ee Baasifiga
Ankara YHT Isticmaalayaasha Shidaalka ee Dib u Celinta
IZBAN Mucaaradka Wagons Rebellion ee naafada
Isku xidhka Heerka Heerka ee Muwaadiniinta Catalaqzı
Dhismaha Wadada Xawaaraha Sare ee Baku Kapikule si loo bilaabo mustaqbalka dhow
Meelaha beeraha ee tuulada Kabaağaç
Khadadka Gaadiidka ee Wadamada-Yurub
Wadooyinku Waxay Xirmay Daraasadaha Heerka 3aad ee Antalya
Tareenka dhulka hoostiisa mara ee Magaalada
Maanta oo Taariikh ah: 19 Meey 1991 inta u dhaxaysa Haydarpaşa Sapanca…
Daqiiqadii ugu dambeysay: Erdogan wuxuu ku dhawaaqay bandoowga 81 magaalo inta lagu gudajiray Iiddii
Waa kuma Süleyman Reyhan?
Golaha Wasakhda Dila ee Dila Coronavirus 30 Sekan
Markab xamuul oo Turkish ah ayaa ka bilaabay Duullimaadyada İzmir
Tareenkii ugu Horreeyay ee Dhoofinta ah oo loo raray Yurub oo uu la socdo Marmaray
Shiinaha: Horey u socoshada baaritaanka Covid-19
Khadka Ankaray ayaa lagu fidin doonaa Mamak iyada oo leh 8 Xarumood! Ogeysiiska Qandaraaska Muuqaalka La daabacay
Digniinaha Kovid-19 ayaa laga qaadayaa Gaadiidka rakaabka ee Waddada!
Liiska Lambarada Telefoonada TCDD Goobaha - Waqtiga 2020-ka
Ka taxaddarida Kovid-19 ee lagu qaadayo Gaadiidka Rakaabka tareenka!
Bayaanka Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Tekirdağ Port
Maqas maqal ayaa lagu badalay khadka 'Konya Tram Line'
Dakhliga Canshuuraha wuxuu kordhay 5% sanadkii Istanbul
Wakaaladda horumarinta Mevlana ee Jamhuuriyadda Turkiga, Go'aanka Madaxweynaha ee ku Saabsan Sharciga Adeegyada Hay'adaha Horumarinta Lambarka 5449, Qaanuunka Shaqaalaha ee Hay'adaha Horumarinta iyo Hay'adaha la xiriira, Hay'adaha iyo Hay'adaha kale ee la xiriira iyo Hay'adaha kale ee xiriirka la leh Wasaaradaha No. 4 [More ...]
Suuliyadaha Dahabka ah ee Lagu Talo Galayo Gawaarida Xayiraadaha 4-Maalmood Ee Izmir
Wadooyin Cusub Ayaa Loo Sameeyay Isticmaalka Baaskiillada Ay Ku Kordhin Doonto Musiibada Ka Dib Izmir
Guusha Dhoofinta Koowaad ee Ejder Yalçın ee Ambulance Qaabeynta
Bayraktar TB2 UAV gaarsiinta Agaasimaha Guud ee Amniga
Saldhigga UAV Waxaa laga aasaasay degmada Cizre ee Şırnak
Saacadaha Baska ayaa wax laga beddelay Bandowga magaalada Bursa